မျက်ဝန်းတဝိုက်အရောင်တွေကိုကြာရှည်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်မယ့် Shadow Stick! | CosmeticMyanmar
Home » Article » မျက်ဝန်းတဝိုက်အရောင်တွေကိုကြာရှည်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်မယ့် Shadow Stick!
ကျွန်မတို့ပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့ Shadow တွေဟာဆိုရင် Powder type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မျက်ဝန်းတဝိုက် ခြယ်သအသုံးပြုတဲ့အခါ တခါတလေ အရောင်လွင့်ပြီးမှေးမှိန်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးနောက်ထပ်မကြုံတွေ့စေတော့ရန်အတွက် Merle Norman ကနေ Shadow Stick လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒီ Shadow Stick လေးဟာ ခရင်မ်ပုံစံမျိုးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မျက်ဝန်းတဝိုက်မှာအရောင်မှေးမှိန်သွားခြင်းမရှိဘဲ ကြာရှည်တည်ရှိနေစေမှာပါ။
ကိုင်ရလွယ်ကူအောင် ထုတ်လုပ်ပြီးသယ်ယူရလည်းလွယ်ကူတော့ ပျိုမေတို့ အကြိုက်တွေ့မှာအမှန်အကန်ပါပဲ။ အတွင်းမှာပါတဲ့ Stick ကလည်း အချွန်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ လွယ်ကူစွာခြယ်သလို့ရအောင်ဖန်တီးထားပါတယ်။ Base အနေနဲ့ ခြယ်သပြီး Powder shadow ကိုအပေါ်မှာထပ်ပြီးခြယ်သခြင်းဖြင့် Powder တွေလည်း အလွယ်တကူလွင့်ပြယ်သွားခြင်းမရှိတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ တကယ်ပဲလှပဆန်းသစ်တဲ့အရောင် ၁၀မျိုးကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း ပျိုမေတို့နှစ်ခြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်နော်။ အလက်အလက်ပါတဲ့ Shadow Stick ၅ရောင်နဲ့ Matte type Shadow Stick ၅ရောင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
ဓာတ်မတည့်ခြင်းမဖြစ်ရလေအောင် သေချာစစ်ဆေးပြီးမှဖြန့်ဖြူးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အသားအရေမရွေးယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အနံ့နဲ့ အဆီတွေပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် မျက်ကပ်မှန်တပ်သူတွေလည်း စိတ်ချစွာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ Shadow Stick နဲ့တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ Brush နဲ့ဖြစ်စေ ခြယ်သနိုင်ပါတယ်။ Best eye shadow အဖြစ် Winner ဆုတံဆိပ်တွေလည်းရရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အရေအသွေးပိုင်းမှာစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။